သူငယ်ချင်းမို့ ပိုကောင်းသည် – Grab Love Story
နီလာတစ်ယောက်အလုပ်ကိစ္စနှင့် ရန်ကုန်ကို ရောက်လာသည်။ မနေ့ညနေကကားစီး မနက်ရန်ကုန်ရောက်တော့ တစ်ဦးတည်း ယောင်ချာချာဖြစ်နေတော့ ငယ်သူငယ်ချင်းဖြစ်တဲ့ ဂျော့ကို သတိရလိုက်သည်။
ဂျော့ဆိုတာက ငယ်ငယ်ကတည်းက အတူစား အတူကစားနေခဲ့တဲ့အကောင် တရပ်ကွက်လုံးမှာ မိန်းကလေးတွေချည်းမွေးထားကြတဲ့ကြားက သူတစ်ယောက်တည်းပဲ ယောက်ျားလေးပါတော့ သူငယ်ချင်းအားလုံးရဲ့ ကစားဖော်ယောက်ျားလေး။ မိသားစုထဲမှာ သားအကြီးမြေးအကြီး ဝိုင်းချစ်ကြတဲ့ အကောင်၊ ရပ်ကွက်ကလဲချစ်ကြတယ်။ တမျိုးလုံး သည်းသည်းလှုပ်တော့ မုန်းဖို့ကောင်းပေမယ့် လူက လူဆိုးတော့မဖြစ်ဘူး။ ခင်စရာအရမ်းကောင်းတယ်။
ဒီကောင်ကိုခေါ်ပြီးနှိပ်စက်မယ်တွေးကာ ဖုန်းဆက်လိုက်တယ်။ မနက်အလုပ်သွားခါနီး ဖုန်းဝင်လာတော့ ကျနော်မသိတဲ့နံပါတ်တစ်ခုပါပဲ။ ဒါပေမယ့် ကျနော်ကိုင်ပြီးထူးလိုက်တယ်။
“ဟဲ့ ငဂျာ့ ငါပါ၊ နီလာလေ”
“အေး မခေါ်စဖူးအခေါ်ထူးလို့ ဘာများလဲ လင်ရလို့ ဖိတ်စာပေးပို့မလို့လား”
“လဖွတ် ဒါပဲခုလုတ်တိုက်နေတာပဲ၊ လင်မယူတော့ဘူး၊ မိန်းမပဲယူတော့မယ်”
“မိုက်တယ် နင့်ကိုယူရင် နောက်တစ်ယောက်ပါ ထပ်ရမယ်”
“ကြောက်စရာမလိုပါဘူးဟာ၊ ငါတို့အသက်လည်း သုံးဆယ်ပဲကျော်နေပြီ”
“မသိဘူးဟာ၊ငယ်ငယ်ကတည်းက ကြောက်ရတာဆိုတော့၊ သိတယ်မလား သူ့သားတွေကို ရွာသူနှင့်ညားမှာစိုးလို့”
“အဲဒါငယ်ငယ်တုန်းကပါဟာ၊ အခုတော့ သူ့မှာ ကူဖော်လောင်ဖက်မရှိလို့ စိတ်ညစ်နေရတာ”
“အေးပါ၊ နင်ဘာကိစ္စနဲ့ ရန်ကုန်လာတာလဲ”
“အလုပ်အပြောင်းအရွှေ့ကိစ္စပါဟာ၊ အခုငါမသွားတတ်လို့၊ လမ်းညွှန်ပေးဦး”
“နင်ကလဲ စကားနာထိုးဖို့ပဲ သိတယ်”
“မသာမ လိ့ဘောစိ၊ ငါလာခဲ့မယ်”
တကယ်တမ်းက နီလာနှင့်ကျနော်က ငယ်သူငယ်ချင်း၊ ရှစ်တန်းအထိ အတူကျောင်းတက်ဖက်၊ ဒါပေမယ့် နီလာက ကျနော့်ထက် အသက်တနှစ်ကျော်ကြီးတယ်။ စာမေးပွဲတနှစ်ကျလို့ အတန်းတူခဲ့တာ။ ရှစ်တန်းအထိ အတူတူဆော့ခဲ့ကြတာ။ ငယ်တုန်းကဆိုရင် လင်မယားလုပ်တမ်းတောင် ကစားခဲ့သေး။ သူတို့က အကြီးတွေဆိုတော့ သူတို့က ဆရာမကြီးပေါ့ဗျာ။ ရှစ်တန်းရောက်လာတော့ ကျနော့်အမေက
“နီလာတို့ အပျိုဖြစ်လာပြီ သားသူတို့နှင့်
ဆိုလို့သာ ကျနော်က ခပ်တန်းတန်းဖြစ်သွားခဲ့တာဗျ၊ ဒီလိုခပ်တန်းတန်းနေတော့ နီလာကမေးတယ်။
“အမေက နင့်ကိုအပျိုဖြစ်နေပြီလို့ ပြောတယ်၊ ငါကြောက်လို့ဟ”
“ငါလဲမသိဘူး၊ အပျိုဖြစ်တယ်ဆိုတာဘာလဲ မသိဘူး”
နီလာကနို့စူစူလေးကိုပြလေသည်။ ကျနော်လဲ အင်္ကျီကိုလှန်လိုက်ပြီး
“ကိုင်လို့မရသေးဘူး နီလာ၊ နို့ကဒီထက်ပိုကြီးမှ ကိုင်တော့မယ်”
ထိုသို့ပင်ငယ်သူငယ်ချင်းဖြစ်ခဲ့ကြလေရာ၊ အခုတော့ သူကအလယ်တန်းပြဆရာမပင် ဖြစ်နေလေပြီ။ ငယ်သူငယ်ချင်း ဖြစ်သည့်အတွက် ကျနော်ချက်ချင်းပင် နီလာဆီကိုသွားလိုက်သည်။ ထိုနောက်နီလာကို ခေါ်ပြီး ရွှေပုဇွန်မှာမနက်စာစားရန် ခေါ်လာခဲ့လိုက်သည်။ မိန်းကလေးတို့ရဲ့ထုံးစံ အသက်သုံးဆယ်အရွယ် တင်ပြည့်ပြည့်ဖြိုးဖြိုးနှင့် အလှသွေးကြွယ်တတ်ကြသည်ဖြစ်၍ နီလာသည်လည်း ခေတ်စကားအရ ကိတ်သည်ဟု ပြောရပေမည်။ တင်ထွားပြီးနှင့် ရင်သားကြီးသည်။ သို့သော် အပျိုဖြစ်၍ ခါးတုတ်ခြင်းမရှိခါးသေးသည်။
“ငါက ဂန်ဒူးမှ မဟုတ်တာ၊ ငါကနှာဘူးလေ ဟားးးဟားး”
“မသာကောင် သူများကိုပြောရရင် ဒီလိုပဲ”
“အေး ရွှေပုဇွန်ပြင်ထားတာ လှတယ်နှော်”
နီလာက lockချထားတာကိုဖြေ၍ပေးလေသည်။ ကျနော်လဲဖုန်းယူ၍ သူ့အားဓာတ်ပုံရိုက်ပေးလိုက်၊ ပြန်ကြည့်လိုက်နှင့် ရေကန်ဘေးတွင် ရိုက်ပေးလိုက်သည်။
သူ Toilet သို့ဝင်သွားစဉ် သူ့ဓာတ်ပုံများကို ကြည့်နေလိုက်ပြီး သူ့ရဲ့ Fb အကောင့်ကိုကြည့်စဉ် Fb အကောင့်က သူ့အမည်မဟုတ်၊ အကောင့်အမည်က လမင်းချို၊ ထိုအကောင့်ကိုမြင်ဖူးသည်ကို စဉ်းစားပြီး ကျနော့်၏ fake အကောင့်တွင် သူငယ်ချင်းဖြစ်နေပြီး စကားပြောဖူးသည်ကို သတိရလိုက်သည်။ အပျိုကြီးလိင်ကိစ္စကို စိတ်ဝင်စားမှန်းတွေးမိပြီး နီလာရောက်လာရာ သူ့ဖုန်းကို ပြန်ပေးလိုက်သည်။
“ကဲ နီလာ နင်သွားရမယ့်ရုံးကိုလိုက်ပို့ပေးမယ်”
သူ့ကိုရုံးကိုပို့ပြီးပြန်လာခဲ့သည်။ ညနေ ထမင်းစားအတူစားဖို့ပြောလိုက်သည်။ နေ့လည်ကျတော့ ကျနော်လဲ fb ခနဖွင့်ကြည့်ရာ လမင်းချိုအကောင့်မှ ရန်ကုန်ရောက်နေသည်ဟု တင်ထားပြီး မီးစိမ်းနေသဖြင့် Hiလိုက်သည်။
သူပြန်ပြီး hi လေသည်။
“ဟင့်အင်း ရတယ်၊ ဘော်ဒါလာလိမ့်မယ်”
“ဟင့်အင်း ခုန်ပါဘူး၊ သူငယ်ချင်းအချင်းချင်းကို”
ကျနော်လည်းအလုပ်ဆက်လုပ်ပြီး စောစောပြန်ဖို့ စီစဉ်ပြီး ညနေနီလာ့ဆီဖုန်းဆက်လိုက်သည်၊
မနက်ပိုင်းကတည်းက အခန်းနံပါတ်သိထားသဖြင့် ဟိုတယ်ဝန်ထမ်းအားမေးရာ လမ်းညွှန်သဖြင့် နီလာ့အခန်းဆီရောက်ပြီး တံခါးခေါက်လိုက်သည်။ နီလာတံခါးလာဖွင့်ပြီး
သူရေချိုးခန်းဝင်သွားသဖြင့် ထိုင်စောင့်ပေးလိုက်ပြီး ရေချိုးခန်းက သူထွက်လာတော့ ကျနော်လဲ ရေဝင်ချိုးပြီး လမ်းမှဝယ်လာသော အဝတ်အစားကို ဝတ်လိုက်သည်။ နီလာကအလှပြင်နေတုန်းပါ။
“အေးပါလုပ်လုပ်၊ နင့်နဲ့ငါဟိုတယ်ထဲမှာ နှစ်ယောက်တည်း”
“ချောကလက်မှိုတက်ကို စားရကောင်းမလား တွေးနေတာ”
“မသာ နင်ပဲ စီးကရက်မှိုတက်”
“အမယ် ခုမှနင်ကနားရှက်စရာဟုတ်လား၊ လမင်းချိုရဲ့”
“အယ်မသာ ငါ့အကောင့်ကို ကြည့်ထားတယ်ပေါ့”
“ရှက်မနေပါနဲ့ဟာ လူတိုင်းနီးနီး fake အကောင့်သုံးကြတာပဲ”
“နင် fake ထဲမှာ ဘယ်သူတွေနဲ့ရင်းနီးလဲ”
“ဘယ်သူရယ်လို့ မဟုတ်ပါဘူး၊ နည်းနည်းပါးပါး စကားပြောဖူးသူပဲရှိတာ”
“Fake ထဲမှာ ဘယ်သူ့ကိုယုံရမှာလဲ”
“ငါတစ်ခုပြောပြမယ်ဟ၊ ဟိုလေ အပြာစာရေးတဲ့ သူတစ်ယောက်ရှိတယ်၊ စတိဗ်တဲ့၊ သူနဲ့တော့ ဆွေးနွေးဖူးတယ်”
“ဝါသနာပါလို့ ဒီစာမျိုးရေးတာလား၊ ပိုက်ဆံရလို့ ရေးတာလားပေါ့”
“ပြီးတော့ သူရေးတဲ့စာအုပ်တွေကို ဖတ်ဖူးတယ်ပေါ့၊ အဖြစ်မှန်တွေလား ဘာလားပေါ့”
“နင်အဲဒီလူကိုသဘောကျလား၊ အပြာစာအုပ်ရေးတဲ့သူပဲ နှာဘူးကျပြီး မပြောဘူးလား”
“စကားပြောရတာအဆင်ပြေတယ်၊ ရိုင်းတာ မပြောဘူးဟ”
“အပြင်မှာဘယ်မေးရဲမလဲ၊ ခုက သူ့လဲကိုယ်မမြင်ဖူးဘူး၊ ကိုယ့်လဲသူမမြင်ဖူးလို့ မေးရဲတာ”
“သူက နင့်ကိုသိနေရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ၊ ပြီးတော့ နင့်ကိုသူလာတွေ့ရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ”
“အာ အပြင်မှာတွေ့စရာအကြောင်းမရှိပါဘူး၊ ကြောက်စရာကြီး”
“တော်ကြာဘုမယ်ချည်းလုပ်နေရင် ဒုကျခ ဟားးးဟားး”
“သေလိုက်ပါလား ကြောက်စရာကြီး၊ ငါမေးဖူးတယ် ပထမဆုံးအတွေ့အကြုံက သေအောင်နာတယ်တဲ့”
“အေးဟဲ့ သူပြောဖူးတယ် ဟားး”
“အဲဒီလိုသာ လိင်ဆက်ဆံတိုင်းနာမယ်ဆိုရင် လင်ယူမဲ့သူရှိပါ့မလားတဲ့”
“တကယ်ပြောတာတကယ်လို့သာ နင်အတွေ့အကြုံ လိုချင်ရင် ငါ့ကိုပြော”
“နင်နဲ့ဆိုတော့ ဆောရီး၊ မျက်နှာပူစရာကြီး၊ သူနဲ့ဆိုတော့တမျိုး ဟားး”
“ငါမေးမယ် ငဂျော့၊ နင်သူနဲ့မသိဘူးလား၊ သူလဲ နင့်လိုဆောက်လုပ်ရေးလုပ်တဲ့ အင်ဂျင်နီယာပဲ”
“ဟေ့တော် တော်၊ တွေးမိရင်တောင် သွေးလန့်တယ်”
“အပျိုကြီးဆိုတာ ဒါမျိုးပဲ၊ လိုလဲလိုချင်တယ် နာမှာလဲ ကြောက်တယ်”
“ဒါပေမယ့် လိုတော့လိုချင်တယ် မဟုတ်လား”
နီလာ့အတွေးကဘယ်လိုနေလဲ မခန့်မှန်းတတ်ပေ။ ခါတိုင်း cbမှာတော့ ဟိုကိစ္စဒီကိစ္စ သူသိချင်တာတွေ မေးဖူးနေပေမယ့် ကျနော်ကိုယ်တိုင်က cb မှာ မည်သည့်မိန်းကလေးနှင့်မဆို စကားပြောရင် အနှောင့်အသွားမလွတ်သော စကားကိုပြောလေ့ မရှိပေ။ ယခုတော့ ထိုသို့သော လိင်ကိစ္စမျိုး ပြောဖူးသောသူမှာ မိမိသူငယ်ချင်းအရင်းကြီး ဖြစ်နေသောအခါ နောက်ပြောင်ကျီစယ်ရင်း အနှောင့်အသွားမလွတ်သော စကားများကို ပြောမိနေသည်။ နီလာလည်း သူငယ်ချင်းအရင်းကြီးမို့ အရမ်းကြီးရှက်မနေဘဲ နှစ်ယောက်ချင်းမို့ စကားတွေကြွယ်နေသည်။ ကြာလျှင် ညစာနောက်ကျတော့မည်။
“နီလာ နင်စတိဗ်ကို မြင်ဖူးချင်လား”
“စတိက တခြားလူမဟုတ်ဘူး၊ နင့်သူငယ်ချင်းအရင်းကြီး”
” ဟီးမသာ ငါရှက်လိုက်တာဟာ”
“ခုမှရှက်မနေနဲ့တော့ နီလာရေ သွားကြမယ် နောက်ကျနေပြီ”
“နင် ဟာလေတကယ့်ကောင်ပဲ၊ ကိုယ့်ဟာကိုယ်ကျ အသုံးမကျဘူး၊ ငါ့ကိုလာခြိမ်းခြောက်နေတယ်”
“မကြောက်ဘူးဟေ့ မကြောက်ဘူး ထ လာသွားမယ်”
ပြောရင်းဆိုရင်းထသွားသဖြင့် ကျနော်လည်း သူ့နောက်ကိုထလိုက်ပြီး အိပ်ခန်းတံခါးသော့ယူကာ ပိတ်ပြီးလိုက်ရတော့သည်။ အခန်းပြင်ရောက်ပြီး reception နားဖြတ်မှ လူတွေက ငဲ့စောင်းကြည့်နေသဖြင့်
“မသာ ငါ့နားကပ်ဟ ငါ့ကိုတမျိုးထင်နေမယ်”
သူ့အနားကပ်လမ်းလျှောက်ပြီး ခပ်တည်တည်ဖြင့် လက်ကိုကိုင်၍လမ်းလျောက်ရာ
“မသာ တော်တော်အသားယူတာကြည့်စမ်း၊ ပိုင်စိုးပိုင်နင်းနဲ့ သူ့မိန်းမကျနေတာပဲ”
ကားပေါ်ရောက်သည့်တိုင် ပေါက်ပေါက်ဖောက်နေကြသည်။ စားသောက်ဆိုင်ရောက်တော့ အအေးခန်း တခန်းယူကာ မှာစရာများမှာပြီး ကျနော်က ဘီယာတစ်ပုလင်း မှာလိုက်သည်။
“အေးအများကြီးမသောက်နဲ့၊ နင်က ကားမောင်းပြီး အိမ်ပြန်ရမှာ”
“နင့်အိမ်ဘယ်လိုပြောမလဲ၊ နင့်အမေအကြောင်း ငါသိတယ်”
“နင်တော့ ပြသနာတက်ဦးမယ်နှော် နင့်အမေနဲ့”
“အာ နင်ငါ့ကို ဘာမှမလုပ်ရဘူးနှော်”
“ငယ်ငယ်ကလိုပေါ့ဟယ်၊ လင်မယားလုပ်တမ်း ကစားချင်လို့”
“ငိုးမ ကလေးဘဝကဟာကို လာပြောနေတာ”
နီလာရှက်သွားသည်။ ဒီကောင်တစ်ခုခုတော့ သိထားပုံရသည်။ ညအိပ်မည်ဆိုပဲ။ အပျိုကြီး နီလာရင်ထဲ တမျိုးဖြစ်သွားမိသည်။ ညအိပ်လျှင် ဒီကောင်က ငယ်ငယ်ကတည်းက လွယ်သည့် အကောင်မဟုတ်။ ငါ့များ ဘုချင်နေလို့လား တွေးပြီး ရင်ထဲတုန်လှုပ်သွားသည်။ သို့သော် ဟန်လုပ်ပြီး မသိချင်ယောင်ဆောင်လိုက်သည်။ ကျနော်လည်း ဘီယာတစ်ခွက်ကို သောက်ချလိုက်သည်။ ထို့နောက် နောက်ထပ်တစ်ခွက်သောက်ရန်ပြင်ရာ
စားသောက်ပြီး ဟိုတယ်ကိုပြန်လာကြသည်။ ဟိုတယ်ကိုရောက်တော့ ကျနော်က ခြေလက်ဆေးကြောပြီး အဝတ်လဲလိုက်သည်။
“တကယ်ပေါ့ဟ၊ လင်မယားလုပ်တမ်း ကစားပါမယ်ဆိုပါမှ”
“ဟာ မဖြစ်ဘူးထင်ဟာ၊ ငါကြောက်တယ်၊ နင်ရော ငါရော ကလေးတွေမဟုတ်တော့ဘူး”
“ဟာ ဟေ့ကောင် ငါကြက်သီးထလာပြီ”
“မကြောက်နဲ့အဲကြက်သီးဖု အာဘွားပေးလိုက်ရင် ပျောက်ပြီ”
သူ့အနားကပ်ပြီးနဖူးကိုလှမ်းနမ်းလိုက်သည်။ နီလာကအတင်းတွန်းရာ ကျနော်သူ့အား ဖက်လိုက်သည်။
“ဟဲ့ လွှတ်ဟ ငါယားတယ်”
“မသာ အဲလောက်တောင်နမ်းချင်ရင် နမ်း.. နမ်း ပြီးမှ နင့်အမေနဲ့တိုင်မယ်”
တမင်ပင်နှတ်ခမ်းကိုနမ်းစုပ်လိုက်တော့သည်။ ပထမတော့နီလာငြိမ်နေသည်။ အနမ်းနွေးနွေးက တမျိုးဖြစ်လာသည်။ ပြန်နမ်းလိုက်သည်။ ပြီးမှ စိတ်ထဲတမျိုးကြီးဆိုမှတမျိုးကြီး။
“တော်ပြီဟာ ငဂျော့ ငါကြောက်တယ်”
တကယ်လည်းကြောက်သည်။ ငဂျော့စိတ်က ဘယ်လိုနေလဲမသိ မိမိစိတ်ကိုတောင် မယုံချင်၊ ကြာလျှင် စိတ်ပါသွားနိုင်သည်မဟုတ်လား။ လိင်ဆက်ဆံမှု့ကို လက်တွေ့ကျကျမလုပ်ဖူးပေမယ့် မူဗီကြည့်ရင်း မိမိ၏လိင်စိတ်ကိုမိမိလက်ဖြင့် ဖြေဖျောက်ဖူးသည်။ ယခုလိုငဂျော့နှင့် နီးနီးကပ်ကပ် နေဖူးသောအခါ စိတ်ထဲသာယာသလိုဖြစ်လာသည်။ ကျနော်က ရပ်မပစ်ဘဲ နီလာ့လည်ပင်းကိုစုပ်လိုက်ရာ
“မတော်တဆ ဗိုက်ကြီးသွားရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ”
နီလာတကယ်ကိုကြောက်တယ်။ သူ့လီးက နီလာ့ပေါင်ကြားကို လာထောက်နေတယ်။ ပူနွေးနွေး မာတောင့်တောင့်ကြီး စိတ်ထဲတမျိုးကြီးဆိုမှ တမျိုးကြီး။ ကြောက်ပေမယ့် နီလာ့အဝှာကစိုချင်နေပြီ။
ငဂျော့ကနီလာ့ အဝတ်ကိုမတင်လိုက်တော့ ဘရာပေါ်လာတယ်၊ ဘရာကိုမတင်ပြန်တယ်။ နီလာ့နို့လုံးဝိုင်းဝိုင်းတွေပေါ်လာတယ်။
“အာ ဟေ့ကောင် “
နီလာရှက်သွားရတယ်။ သူကနီလာ့နို့ကို လျှာဖျားလေးနှင့် ထိတွေ့လိုက်တော့ နီလာနို့သီးခေါင်းလေးက ချွန်လာသလို နို့တအုံလုံးကြက်သီးဖုတွေ ထသွားရပြန်တယ်။ ကျင်တက်တက်ခံစားမှု့နှင့်အတူ အထိအတွေ့ရဲ့ ခံစားမှု့ရသတမျိုးကိုခံစားလိုက်ရပြန်တယ်။ အလိုလိုညည်းမိတယ်။
“အာ့ အင်းးဟင်းးဟင်းးး ဂျော့ ငါ မနေတတ်ဘူး၊ တော်ပြီ”
ကျနော်လဲနို့သီးခေါင်းဖျားလေးကိုလျှာနှင့် ထိုးမွှေပြီး ယက်လိုက် နို့အုံတစ်ခုလုံးကိုစို့လိုက်နဲ့ လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ နီလာတစ်ယောက် အော်ညည်းသံများထွက်၍ပင် လာသည်။ ဂျော့ရဲ့လက်က နီလာ့ရဲ့ပိပိအပေါ်ကနေအုပ်ကာ ပွတ်ပေးလေတော့ နီလာတွန့်ကနဲ့ဖြစ်သွားပြီး ပိပိတအုံလုံး စိုသွားသလိုခံစားလိုက်ရပြီး ရင်ထဲ သိမ့်သိမ့်တုန်သွားရသည်။
အပေါ်မှ ပွတ်ရုံမက အကွဲကြောင်းတလျောက် တဖြေးဖြေးပွင်ပေးရာ ပိပိတအုံလုံး ကြွတက်လာလေသလား ထင်မှတ်ရအောင် ဖောင်းကြွလာခဲ့သည်။ အကွဲကြောင်းအလျောက် စုံဆန်လှုပ်ရှားပြီးနောက်မှာ အကွဲကြောင်းအပေါ်နား အစေ့နာရာနားကို လက်ခလယ်ဖြင့် ဖြေးဖြေးချင်းပွတ်လေရာ
မိမိလုပ်ဖူးသော်လည်း ယခုအထိအတွေ့နှင့်မတူပေ၊ စိတ်တို့ချက်ချင်းထကြွလာသည်။ မျက်လုံးစုံမှိတ် အော်ညည်းမိသည်။ ထိုစဉ်မှာပင် ဂျော့သည် နီလာ့နှုတ်ခမ်းအား စုပ်နမ်းလေရာ နီလာလည်း စိတ်မထိန်းနိုင်ပဲ ပြန်လည်စုပ်နမ်းလိုက်တော့သည်။ ငဂျော့ ဤမျှလုပ်တတ်လိမ့်မည်ဟု မထင်ခဲ့ပေ။ နီလာ၏ ကာမစိတ်ကို တဖြေးဖြေးထကြွလာအောင် လုပ်ဆောင်ပေးခြင်းကြောင့် နီလာ့၏ကာမစိတ်တို့ အထွဋ်အထိပ်သို့ ရောက်ရှိလုနီးနီးဖြစ်လာသည်။
ထိုသို့ဖြစ်နေစဉ်မှာပင် ဂျော့ကရပ်ပစ်လိုက်သည်။ နီလာမျက်လုံးဖွင့်ကြည့်လိုက်စဉ် ဂျော့က အဝတ်တွေကို ချွတ်ပစ်လိုက်သည်ကို တွေ့လိုက်သည်။ မျက်လုံးက အလိုအလျောက်ပင် ဂျော့၏ပေါင်ကြားနေရာကိုကြည့်စဉ် မာ၍ ထောင်မတ်နေသော ဂျော့လီးကြီးအား တွေ့လိုက်ရသည်။ အပြင်တွင် ဤမျှကြီးမည်ဟု ထင်မှတ်မထားသောလီးသည် ငါးမတ်လုံးမျှမက နိုင်ပေ။ အရှည်သည်လည်း ခြောက်လက်မစွန်းစွန်းရှိ
“မကြောက်နဲ့ သူကလိမ္မာတယ်၊ နင့်ကို မနာစေရဘူး”
နီလာ့လက်ကိုကိုင်ပြီး လီးပေါ်တင်ပေးရာ နီလာလည်း အယောင်ယောင်အမှားမှားပင် ကိုင်ထားမိသည်။ အထိအတွေ့မှာ တခြားသောနေရာများနှင့်မတူပေ။ ပူနွေးနွေးကလေးနှင့် တမျိုးလေးဖြစ်ရသည်။ ဂျော့က နီလာ့လက်ကိုဆုပ်ကိုင်ပြီး လက်ကိုလီးအရင်းထိ ဆွဲချလိုက်ရာ နီရဲသော ထိပ်ဖူးကြီးကပေါ်လာကာ ဒစ်ကကားကားကြီးဖြစ်နေသည်။ နီလာတွေးမိသည်က မှိုလိုလိုလီးလိုလိုဟူသော စကားပင်ဖြစ်သည်။ မှိုပွင့်ပမာဖြစ်၍ လူတို့တင်စားကြဟန်ရှိသည်ကို တွေးမိလိုက်သည်။
“အကြီးကြီးပဲဟာ၊ နိုင်ငံခြားမူဗီထဲကလောက် ရှိတယ်”
“ဟုတ်ရဲ့လားဟယ် ငါကအပြင်မှာ ကလေးတွေဟာပဲ တွေ့ဖူးတယ်”
“နင့်ကို လောကနိဗ္ဗာန်ကို ပို့အုံးမယ်”
“အာ မလုပ်နဲ့ဟာ၊ ရှက်စရာကြီး”
နီလာရှက်သွားရပြန်သည်။ အမှန်တော့ မူဗီတွေမှာမြင်ဖူးတော့ အနမ်းခံကြည့်ချင်ခဲ့သည်။ သို့သော် မိမိမှာ ချစ်သူမှမရှိခဲ့ပါ။ ယခုမူ သူငယ်ချင်းအရင်းကြီးက နမ်းပေးမည်ဆိုသောအခါ ရင်တုန်မိသည်။ ဂျော့က နီလာ့ပေါင်ကြားကိုဝင်ကာ မျက်နှာအပ်တော့ မသိစိတ်၏လှုံ့ဆော်မှု့ကြောင့် ပေါင်ကို ဟလိုက်မိသည်။ ဂျော့က ပေါင်ကိုမတင်ပြီး စိုရွှဲနေသော မိမိပိပိအား လျှာနှင့်အပြားလိုက် ယက်လိုက်သောအခါ
လူကတုန်ယင်သွားသည်၊ ပူနွေးစိုစွတ်သော လျှာကအကွဲကြောင်းတလျောက် ထိထိမိမိ ယက်သွားချေသည်။ ထိုနောက် လျှာဖျားက အကွဲကြောင်းတလျောက် တိုးဝင်လာပြီး နှုတ်ခမ်းသားများအား ပွတ်ဆွဲသွားပြန်သည်။
ခါးကလေပေါ်ကြွသွားသည်။ ပိပိတို့ မော့ဖောင်းလာသည်။ လက်ကအိပ်ရာခင်းကိုသာ တင်းတင်းဆုပ်ကိုင်မိတော့သည်၊
တရှီးရှီးနဲ့အရမ်းကောင်းနေသည်။ အစေ့ကိုလျှာနှင့် ထိုးမွှေပြီး တပြွတ်ပြွတ်စုပ်ပြန်သည်။
“အာ့အိုးးရှီးးရှီးးးအိုးးအားးအားဂျော့ အားးရှီးးရှီးးး အား ငါပြီးတော့မယ် အားရှီးးရှီးးး အားး”
တကယ်ပါ ဒီလိုပြီးသောအရာသာမျိုး မတွေ့ဖူးသေးသော နီလာ့အဖို့ စိတ်က ကျေနပ်မိတော့သည်၊
“အားနာမနေနဲ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် လုပ်မှတော့ အဆုံးထိ သွားမှကောင်းတာ”
“နင်လုပ်ချင်ရင် လုပ်တော့၊ ဗိုက်မကြီးစေနဲ့၊ ကြီးရင် နင်တာဝန်ယူ”
ဂျော့ကကွန်ဒွန်ထုပ်ကိုဖောက်ပြီးသူ့ရဲ့မာနေတဲ့ လီးပေါ်စွပ်ချလိုက်သည်။ ထိုနောက် နောက်ထပ် အထုပ်တစ်ထုပ်ကိုဖောက်ပြီး စွပ်ထားသော ကွန်ဒုံးပေါ်မှာ သုပ်လိမ်းလိုက်သည်။
ကျနော်လည်းနီလာ့ပေါင်ကြားဝင်ပြီး ပိပိအဝကိုဂျေထပ်သုပ်ပြီး လီးတဲ့ကာ တဖြေးဖြေးနှင့် ဖိသွင်းလိုက်သည်။
တဝက်တောင် မဝင်သေးပေ၊ နာတယ်ပြောပြီး ပေါင်တွင်းသားများကို နီလာကညှစ်ထားသည်။
ကျနော်လည်းနီလာ့နို့ကိုစို့ပြီး နီလာ့စိတ်ကို လျော့ထားစေသည်။ လီးက တင်းကြပ်ကြပ်ဆို့ဆို့ကြီး ဝင်လာပြီး ပိပိအတွင်းသားများက နာကျင်နေတာမို့ ဂျော့ကိုပြောလိုက်သည်။
“ဗျစ် ဗျစ် ဗျိ”
လီးကိုတဆုံးအထိသွင်းပြီး နီလာ့ရဲ့ခါးကို လှမ်းဆွဲပြီး တဖန်းဖန်းမြည်အောင် လိုးလိုက်တော့တယ်။ နီလာရဲ့လုံးကျစ်ကျစ်ခါးလေးကို ကိုင်ပြီးလိုးတာမို့ ဂျော့စိတ်တွေထန်နေလို့လားမသိဘူး မြန်မြန်လေးဆောင့်လိုးတော့ နီလာမှာ ရှေ့ကို လဲမသွားရအောင် ထိန်းထားရတယ်။ ကျပ်ကျပ်
တည်းတည်းပိပိလေးကို ဂျော့ရဲ့လီးက ထိုးခွဲပြီးဝင်လာတယ်။
“ဘွတ် ဖွတ် ဖန်းဖန်းဖန်းး”
ပုံစံပြောင်းပြီးလျော့သွားတဲ့ ကာမစိတ်က နီလာ့ကို တဖန်ပြန်တက်လာစေတယ်။ ဒီအကြိမ်ကတော့ ဝင်ချက်တိုင်းထိစေတယ်။ သားအိမ်နားအထိကို ရောက်နေတာကြောင့် ပိုပြီးအရပ်ပုတဲ့နီလာအတွက် အောင့်လာတယ်။
ကျနော်ကလဲ အပျိုကြီးပိပိကို အပီအပြင် လိုးရတာကြောင့် ကြပ်ထုပ်နေတာမို့ ချော့လိုးတယ် ဆိုပေမယ့် ပြီးချင်သလို ဖြစ်နေတာကြောင့်
“ဖွတ် ဖန်း ဖန်းးဘွတ် ဘွတ် ဖန်း”
နီလာလည်း ကာမဆက်ဆံဖူးတာ ဒီတကြိမ်ထဲဆို ဆိုသလောက် အရသာထူးထူးဆန်းဆန်းကို ခံစားလိုက်ပြီး ပိပိထဲကအရည်တွေ စိမ့်ထွက်သွားသလို ခံစားရတယ်။ တကိုယ်လုံးလည်း တုန်ယင်ကာ ဆင်းသွားပြီး ပါးစပ်ထဲက အီးကနဲ အသံထွက်သွားတော့တယ်။
သိပ်မကြာတော့တဲ့အချိန်မှာ ဂျော့လီးပျော့သွားမှန်း သိလိုက်ရတယ်။ သူပြီးသွားတာ ကွန်ဒွန်းထဲမှာ ဆိုတော့ နီလာ သိပ်မစိုးရိမ်တော့ပါဘူး။ နီလာလဲ မောပန်းသလိုဖြစ်ပြီး အားကုန်သွားသလို ခံစားလိုက်ရပြီး ကုတင်ပေါ်မှောက်ကျကာ ခနမှိန်းနေပေမယ့် ဂျော့ကတော့ အမောဖြေပြီး နီလာ့ကိုဖက်ထားတယ်လေ။
နီလာကောင်းတယ်လို့တော့ နှုတ်မှမဖြေရဲပါဘူး။ နောက်တကြိမ်ထပ်လုပ်မှာလဲ စိုးရိမ်တယ်။ပိပိလေးက ကြိမ်းစပ်နာကျင်နေတာကြောင့်
“အရမ်းနာတယ်ဂျော့၊ ကြိမ်းစပ်နေတာပဲ ငါ့ဟာလေးတော့ ကွဲပြဲသွားပြီလား မသိတော့ဘူး”
“မကွဲပါဘူးနီလာရယ်၊ အပျိုစစ်စစ်လေးမို့ ပထမအကြိမ်က ဒီလိုပဲတဲ့၊ နောက်အကြိမ်ဆိုရင် နာတာပျောက်ပြီး ဖီးလ်တွေရှိတော့မှာ”
“နောက်တကြိမ်မလုပ်ရဲတော့ဘူး၊ ခုတောင် အရမ်းနာနေပြီ”
“အင်း ခုနောက်ထပ်မလုပ်တော့ဘူးလေ၊ နောက်ရက်မှလုပ်မှာ”
“ငါဗိုက်ကြီးရင် ဘယ်လိုလုပ်မှာလဲ၊ ပြသနာတွေကြီးမယ်”
“ဟာ ဘာဆိုင်လို့၊ ဘယ်သူကပြောမှာလဲ”
စကားပြောနေရင်းနို့ကိုလာကလိပြန်တယ်။ မထိတထိနဲ့ လုပ်နေပြန်ပြီ။ ဂျော့ရဲ့လှုံ့ဆော်မှု့ကြောင့် ကာမစိတ်က တဖန်ဖြစ်လာပြန်ရော။ ဒီလိုနဲ့ နောက်တကြိမ်ပြန်စဖို့ရာ တာစူလာခဲ့တယ်။ ဒုတိယအကြိမ်မှာတော့ ပထမကြိမ်တုန်းကလို ကြောက်ရွံခြင်းမရှိတော့ပဲ ပိုမိုရဲတင်းသလို ဖြစ်လာခဲ့တယ်။
“နီလာ ငါ့ညီလေးကို နမ်းပေးပါလား”
“အေးပါ ငါတော့ သိပ်မလုပ်တတ်ဘူး”
နီလာဂျော့လီးကို လျှာနဲ့အရင်တို့ကြည့်ပြီး ငုံစုပ်ကြည့်တယ်။ စုပ်ရတာတမျိုးလေးမို့ စမ်းသတ်စုပ်ပြီး နောက်အဆင်ပြေတာနဲ့ မူဗီထဲကလိုပဲ စုပ်ပေးလိုက်တယ်။ ငဂျော့ဆို တအားအား တအီးအီးနဲ့ ညည်းနေတာ။ ခုတော့ နီလာလီးကြီးကို ငုံစုပ်တတ်ခဲ့တယ်။ ဂျော့ရဲ့ရဲ့ စုပ်ယက်မှု့မှာ လဲသာယာတတ်ခဲ့ပြီ။ ကြိုက်လည်း ကြိုက်သွားမိတယ်။ ဂျော့ဟာ ကာမဆက်ဆံမှု့မှာ ဆရာတစ်ဆူဖြစ်နေပြီဆိုတာ သိလိုက်တော့တယ်။
စုပ်ရုံမကလျှာဖျားနှင့်ပင်ထိုးမွှေပေးလိုက်သည်။ ဒစ်ဖျားကိုလည်း လျှာနှင့်ရစ်ပတ်ပြီးယက်လိုက်ရာ
“အာ့ ရှီးးရှီးးးအားး ကောင်းလိုက်တာ နီလာရယ်”
လူကကော့ကော့ပြီးအော်ညည်းနေသည်၊ ဂွေးဥလေးကို မနာကျင်စေဘဲ ဖျစ်ညစ်ပြီး စုပ်ပေးလိုက်သည်။
ဂျော့လီးကအလွန်အမင်းကြီးလာသလိုဖြစ်လာသည်။ အကြောပျိုင်းပျိုင်းထ၍ မာကြောမှု့က သံချောင်း တချောင်းအလားပင်ဖြစ်လာသည်။
“နီလာ ငါမရတော့ဘူးဟာ လုပ်ချင်ပြီ”
နီလာအားကုတင်ပေါ် ကန့်လန့်လုပ်ပြီးခါးကို ကုတင်ဘောင်ဘေးအထိ ဆွဲကာယူလိုက်သည်။ ထို့နောက်မှာတော့ ကျနော်ကကုတင်အောက်တွင် မတ်တပ်ရပ်ပြီး နီလာ့ခါးအောက်ခေါင်းအုံးဆွဲယူကာ ခုလိုက်သည်၊ နီလာ့အဖုတ်ကဖောင်းပြီး မို့မောက်နေသည်။ ခြေနှစ်ချောင်းမ၍ ထောင်လိုက်ကာ ပိပိထဲလီးတေ့ကာ ဖိချလိုက်သည်။
“အို့! အာ့! အားးး”
နို့ကိုစို့ပြီးဖြေးဖြေးချင်းပင် အသွင်းအထုတ် လုပ်လိုက်သည်။
“ဘွတ် ဗျစ် ဖွတ် ဖွတ် ဖတ်ဖတ်”
လီးဒစ်ကပိပိအတွင်းသားတလျောက် ပွတ်ဆွဲသွားလေသည်။ အသွင်းအထုတ်တို့ ညက်ညောလှသည်။ အစေ့ကိုထိသွားသည်။ နီလာညည်းလောက်အောင် အသည်းခိုက် ကောင်းလွန်းလေသည်။ အရှိန်တက်လာသော ကာမစိတ်တို့အလျှံ တညီးညီးလောင်မြိုက်လာသည်၊ တဖတ်ဖတ်နှင့် အသားစိုင်ချင်းထိသံတို့က စည်းချက်တကျပင် ထွက်ပေါ်လာသည်။
“ဖတ် ဖွတ် ဘွတ် ဖွတ်ဗျိ ဗျိ”
လီးကအဝင်အတွက်က ပိုမြန်လေ ကာမစိတ်ကို ပိုကြွလေ။ ပိုညည်းလေ မျက်လုံးကိုမှိတ် နှုတ်ခမ်းကိုကိုက်၍ ဂျော့လည်ပင်းကို ဖက်ထားမိသည်။ ဆောင့်ချက်တို့၏ စွမ်းအားကြောင့်ပင် နီလာစိတ်ကပိုကြွပြီး ပြီးဖို့ဖြစ်လာသည့် အထွဋ်အထိပ်ရောက်လေပြီးခါနီးလေ အော်ညည်းမိလေ၊
နို့စို့နေရင်းလုပ်နေရာမှရပ်ပြီး မတ်တပ်ပင် ဆက်လိုးနေပြီး ကာမစေ့နေရာအား လက်ဖြင့်ပွတ်ပေးရာ
နီလာ့အသံကပြီးခါနီးလေ ပိုညည်းလေဖြစ်လာသဖြင့် ကျနော်လည်း စိတ်ကို မတင်းထားပဲ စိတ်ကိုလွှတ်ချပြီး တချက်ချင်းဆောင့်လိုးလိုက်သည်။
“အာ့ အိုး အီးးးးအားးးရှီးးရှီး”
ဆတ်ကနဲတုန်ပြီး နီလာပြီးသွားတော့သည်။ ဂျော့လည်း ဆက်တိုက်လှုပ်ရှားပြီး မကြာမီပင် အီးအားအော်ရင်း ပြီးသွားတော့သည်။ ထို့နောက် သူ့လီးမှ ကွန်ဒွန်ကိုချွတ်ပြီး အမှိုက်တောင်းတွင် သွားပစ်ရာနီလာမှ အိပ်ရာကထပြီး တစ်ရှူးများယူပြီး ဂျော့အလာကိုစောင့်လိုက်သည်။ ဂျော့မှာ အေးကွန်းခန်းထဲ ချွေးများပျံလျက်ရှိနေသည် မဟုတ်လား။ ထို့ကြောင့် ဂျော့က နီလာ့အနားလာမှ အိပ်ရာမှထ၍ချွေးများကို သုတ်ပေးလိုက်တော့သည်။ ဂျော့ကပြုံးလျှက်ပင်
“လိအဆင်ပြေလား၊ အလကားရရင် ရေတောင်ဗိုက်ကားအောင် သောက်တဲ့ကောင်၊ လုပ်တာ မချိမဆန့်နှင့်ခံရတဲ့လူကို မငဲ့ညာဘူး”
“ဒီဟာက ဒီလိုလုပ်မှထိတာ နင်သိပါတယ်”
“လိတောင် မသိဘူးဟေ့ကောင်၊ စကားမပြောနဲ့တော့ မောနေပြီမဟုတ်လား အိပ်တော့”
ဂျော့ကနီလာ့ကိုဖက်၍ အိပ်ရာနီလာလည်း ကျေနပ်ရပြန်သည်။ နောက်တော့ နီလာလည်း အိပ်ပျော်သွားတော့သည်။ နှစ်ယောက်သားဖက်ပြီး အိပ်ပျော်သွားကြတယ်။ နီလာလည်းနှိုက်ခြိုက်စွာ အိပ်ပျော်သွားပြီး ပြန်နိုးလာတော့ ကိုယ်တော်ချောက နီလာ့ကို ဖက်ထားသေးတယ်။ ဂျောရရဲ့ လီးက မာတောင်နေတဲ့ပုံရတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ နီလာကိုလာထောက်နေသည်။
နီလာကြားဖူးတာက ယောက်ျားလေးတွေက မနက်ပိုင်းဆို ဟိုမုန်းထကြွတယ်တဲ့။ ဒီအချိန်ဆိုရင်တောင် နေလေ့ရှိတယ်တဲ့လေ။ နီလာက ဂျော့ဟာကို ကိုင်ကြည့်ချင်လာတာကြောင့် ကိုင်ကြည့်လိုက်တယ်။ ပူနွေးနွေး မာတောင့်တောင့်လေးနဲ့ကျန်တဲ့ အသားထိကြည့်သလိုမျိုး မနေတာကြောင့် ကိုင်ရတာတမျိုးလေးဖြစ်တော့ ကိုင်ကြည့်ရင်း ဖွဖွလေးဆုပ်ကိုင်ပေးလိုက်ရာ ဂျော့နိုးလာပြီး
“ဟမ်.. ငါက ဘယ်လိုလုပ်ပေးရမှာလဲ”
ဂျော့က နီလာလက်ကိုကိုင်ပြီး ဂွင်းတိုက်သလို လုပ်ပြလိုက်ရာ နီလာလည်း ဂျော့ပြသကဲ့သို့ လုပ်လိုက်သည်။ ဂျော့လီးက ထိပ်ဖူးကြီးကားလာကာ တဖြေးဖြေးမာပြီး ကြီးရှည်လာသည်။
“လုပ်မနေနဲ့တော့ ဗိုက်ဆာနေပြီ၊မ မနက်စာသွားစားကြမယ်”
“လုပ်စမ်းပါဦး နီလာရယ်၊ ငါကောင်းနေပြီ”
နီလာဂွင်းတိုက်ပေးရင်းနှင့်ကြီးကာ တဆတ်ဆတ်တောင်လာသော လီးကို စိတ်ထဲတမျိုးဖြစ်လာပြီး ခေါင်းငုံ့ကာ တချက်ငုံစုပ်လိုက်သည်။
“ဟာ ကွာ ကောင်းခန်းရောက်မှတန်းလန်းကြီးကွာ”
နီလာရေချိုးခန်းတံခါးကဂျော့ကို ကြည့်လိုက်ပြီး တံခါးပိတ်ထားလိုက်သည်။ ဂျော့လီးတရမ်းတရမ်းနဲ့ ကျန်ခဲ့သည့်အဖြစ်ကိုကြည့်ပြီး ရီလိုက်သည်။
“နီလာနင်တော်တော်ဆိုးတယ် ငါတော့ ဒုက္ခရောက်ပြီ”
နီလာမျက်နှာသစ်ရေချိုးပြီး သဘက်ပတ်ကာ အပြင်ကိုထွက်လိုက်ရာဂျော့လီးမှာ မပျော့သေးပဲ တောင်နေလျက်ပင်ရှိသေးသည်။
“အမယ် မပျော့သေးဘူး ကြည့်စမ်း”
“ဘယ်ပျော့မလဲ နင်က အာငွေ့ပေးသွားတာကိုး”
“ခစ် ခစ် ခစ်၊ ကဲပါမနက်စာစားပြီးမှ သူ့ကိုဆက်ပြီး အနိုင်ကျင့်မယ်”
“အေးပါ အဲဒီအချိန် ငါလဲနင့်ညီမလေးကို အနိုင်ကျင့်မှာ”
ကျနော်လည်းရေချိုးခန်းထဲဝင်ရင်း မျက်နှာသစ်သွားတိုက်ပြီး ရေချိုးလိုက်သည်။ အပြင်ကိုထွက်လာရာ နီလာက အဝတ်အစားဝတ်ပြီး မိတ်ကပ်ပါးပါးအုပ်ထားပြီးဖြစ်နေသည်။ နီလာ့ကိုမြင်မှ လီးကပြန်တောင်ချင်လာသည်။ အတွင်းခံကောက်စွပ်ပြီးနောက် အတွင်းခံထဲမှ လီးကဖုဖောင်းကာ ရုန်းကန်နေရရှာသည်။ ပုဆိုးတစ်ထည်ကောက်ဝတ်ပြီး အပေါ်က အင်္ကျင်္ီဝတ်ကာခေါင်းဖြီးပြီးနောက်
နီလာတံခါးနားမသွားခင် ဂျော့နားကပ်ပြီး ဖုဖောင်းနေသောနေရာကို တချက်သွားကိုင်ပြီး တံခါးဝသွားကာ လျှာထုတ်ပြောင်ပြလိုက်သည်။
ဟိုတယ်ကမနက်စာဘူးဖေးကျွေးတော့ ဟိုတယ်ကအစားအစာများကို ဟိုနည်းနည်း ဒီနည်းနည်းယူစားလိုက်သည်။ နီလာက အတွေးတချက်ပေါက်ကာ ဂျော့နားကိုကပ်ပြီး လင်မယားပုံစံပေါက်အောင် လုပ်နေလိုက်သည်။ နီလာထိုကဲ့သို့ လုပ်လေကျနော့်မှာ အသဲယားလေဖြစ်လာပြီး
“မလုပ်လို့မဖြစ်ဘူးဟဲ့၊ လူတွေကညားခါစ လင်မယားလိုထင်အောင် လုပ်နေရတာ”
မချင့်မရဲဖြစ်နေသောဂျော့ပုံစံကြည့်ပြီး စိတ်ထဲ ရီလဲရီချင်တယ်။
ဂျော့ကို တမင်ညင်းဆဲလိုက်သည်။ ဂျော့က ခန္ဓာကိုယ်ကိုခပ်ယို့ယို့လုပ်ပြီးသွားယူနေတဲ့ပုံကို ဓာတ်ပုံလှမ်းရိုက်လိုက်သေးတယ်။ သူမတ်တပ်ရပ်နေလို့ မရတဲ့ပုံပေါ်နေတယ်၊မတ်တပ်တာသာ ရပ်ရင်သူ့ဟာကြီးက ရှေ့ငေါထွက်နေမှာ မြင်ယောင်နေမိတယ်လေ။ ဂျော့အအေးခွက်ယူလာပြီးပေးတော့ ကြည်ပြာယူသောက်တယ်။
နီလာသိလိုက်ပြီ၊ ကာမဆက်ဆံချင်ရင် ဗိုက်အရမ်းတင်းနေလို့မဘူးဆိုတာကိုပေါ့။ နီလာ ပုခုံးတွန့်ပြပြီးမျက်လုံးပြူးပြလိုက်သည်။ နီလာဒီတစ်ခေါက်ခရီးထွက်ရတာ ပျော်နေသည်။ စိတ်လွတ်ကိုယ်လွတ် ရှိသလိုလဲဖြစ်ရသည်။
စားသောက်ပြီး ရုံးသွားရန်ကလဲ စောသေးသည်မို့ ဟိုတယ်ဘက်ပြန်လာလိုက်သည်။ အခန်းထဲရောက်သည်နှင့် ဂျော့က နီလာကိုဖက်ကာ ပွေ့ချီလိုက်သည်။
နီလာပထမတော့လန့်သွားပြီး ဂျော့မျက်နှာကို ကြည့်လိုက်သည်။ ဂျော့ကနီလာကို ကုတင်ပေါ် အသာအယာချလိုက်ပြီး နှုတ်ခမ်းသားများကို စုပ်ယူတော့သည်၊
မည်သို့သောအကြောင်းတရားတွေ ကိုနီလာမသိ ပြန်နမ်းချင်လာသဖြင့် နီလာပြန်နမ်းစုပ်လိုက်သည်။ ဂျော့အနမ်းက နီလာ့တကိုယ်လုံး နွေးထွေးသွားစေသော အနမ်းတို့ကို ခံစားရလိုက်သည်၊ နှုတ်ခမ်းမှတဆင့် လည်တိုင်အထိ စုပ်နမ်းလေရာ တကိုယ်လုံးအကြောတို့ တဖိန်းဖိန်း တရှိန်းရှိန်းဖြစ်လာကာ ပါးနှင့်နား ပူနွေးလာသကဲ့သို့ ကာမစိတ်တို့ပါထကြွလာခဲ့သည်ကို နီလာသိလိုက်
လည်းမတားမိတော့ပေ။ ဂျော့အလိုကျ နေချင်နေမိသည်။ ဂျော့လီးကလည်း မိမိပေါင်ခြံကို လာထိနေသည်လေ။ မိမိနို့ကိုတပြွတ်ပြွတ်စို့ရင်း ပေါင်တံတလျောက် ပွတ်ပေးနေသည့်အခါ အထိအတွေ့၌ သာယာလာပြီး လူက အလိုလိုညည်းမိတော့သည်။
နို့ကိုနာကျင်အောင်မစို့ပဲလျှာဖျားနှင့်သာ စို့ပေးသဖြင့် ကာမစိတ်တို့တိုးလျက်လာခဲ့သည်။ ထို့အပြင် နီလာတင်သားများကိုဖြစ်ညှစ်ပြီး လုပ်နေသဖြင့် နီလာ့ပိပိမှ အရည်တို့စိုစွတ်လာခဲ့ရပြန်သည်။ ဂျော့က နီလာ့အဝတ်နှင့် အတွင်းခံကိုပါဆွဲချွတ်ရာ နီလာလည်း ခါးအောက်ပိုင်းကြွပေးလိုက်သည်။ အောက်ပိုင်း၌အဝတ်တို့ကင်းမဲ့လေသည်။
ပေါင်ကြားထဲ လက်ရောက်လာသဖြင့် နီလာလည်း ပေါင်ကို ဟပေးလိုက်သည်။ အကွဲကြောင်းတလျှောက် ဂျော့လက်တို့ စုံဆန်ပွတ်ချေသည်။ လူလည်း ရင်ခုန်သလို ဖစ်လာကာ တကိုယ်လုံး လေထဲရောက်နေသလို မောပန်းလာသလိုဖြစ်ပြီး အာခါင်တို့ ခြောက်လာသည်။ ထိုအရာသည်ပင် ရင်ခုန်ခြင်းလား ၊ကာမစိတ်တို့ဖြစ်ခြင်းလား နီလာ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဖို့ရာ အချိန်မရပေ။ ညည်းမိလျက်သာနေမိသည်။
ဂျော့က နီလာ့ဆီးခုံနားမျက်နှာအပ်လိုက်သောအခါ နီလာ့စိတ်တို့ လေထဲလွင့်မြောသလို ခံစားရပြီး ပေါင်ကို ကားလျက်မြှောက်ပင့်ပေးမိသည်။ အကွဲကြောင်းတလျောက် စုံဆန်လူးရင်း ယက်ပေးလာသော ဂျော့လျှာဖျား၌ အသိစိတ်ကို လက်မြှောက်အရှုံးပေးသကဲ့သို့သာ စိတ်ကို လွှတ်လိုက်တော့သည်။ ပူနွေးစိုစွတ်သော လျှာဖျားက ပိပိအတွင်းသားတလျောက်ထိုးမွှေပြီး အစေ့ကို ထိုးကလော်လေရာ
အောက်ပိုင်း၌ဂျော့ကဖိထား၍ အပေါ်ပိုင်းကြွတက်ပြီး လက်နှစ်ဖက်နဲ့ဂျော့ခေါင်းကို ဖိထားမိလိုက်သည်။ ကာမခုလုတ်ခေါ်သော ကာမဖူးကို စုပ်ခံလိုက်ရသည်ဖြစ်ရာ ကာမစိတ်တို့ အလျှံတညီးညီးထကာပိပိထဲမှပါ အရည်များ စီးထွက်စေလိုက်သည်။ ဒီနေ့လုပ်ခြင်းသည် နီလာ၏ ဒုတိယအထိအတွေ့ဖြစ်သဖြင့် မနေ့ညကထက် ပိုကောင်းနေသည်။ အဖုတ်ထဲလက်နဲ့ကလော်ပြီး အစေ့ကို တပြွတ်ပြွတ်စုပ်ရာ နီလာ့တကိုယ်လုံး ထွန့်ထွန့်လူးစေရပြန်သည်။
နီလာညည်းရင်းပင် တစ်ချီပြီသွားစေသည်။ မြောက်တက်လာသော ခန္ဓာကိုယ်မှာ ပြန်ပြီးပြုတ်ကျလာသည်။လူလဲ ညည်းရသဖြင့် အလွန်ပင်မောဟိုက်၍နေရတော့သည်။
ဂျော့အဝတ်တို့ချွတ်လေပြီ။ လီးရမ်းရမ်းနဲ့ အမောဖြေနေသော နီလာ့အနားကပ်အိပ်ရာ နီလာက အမောဖြေရင်ရင်း ဂျော့လီးကို ဂွင်းတိုက်ပေးသည်။ ထိုနောက်တော့ နီလာလည်း တတ်သမျှ မှတ်သမျှသောပညာနဲ့ ဂျော့လီးကို ငုံစုပ်တော့သည်။ အာငွေ့ကြောင့်လား နီလာမသိချေ။ ဂျော့လီးက အရမ်းပင်ကြီးလာသည်။ ထိပ်ဖူးဝ၌ အရည်တို့စိမ့်ထွက်လာသည်၊ ငံပြပြအရည်ဖြစ်သော် အနံ့နှင့် အရသာတို့မဆိုးတောကြောင့် နီလာစုပ်ရတာ
ထွက်လာသော အရည်တို့ကိုလည်း ပါးစပ်ထဲ ငုံမထားပဲ မြိုချရင်း စုပ်လိုက်သည်။ ထို့အပြင် ဂျော့၏ ဂွေးဥကြီးကိုလည်း အသာအယာ ညှစ်ပေးလိုက်သည်။ ဂျော့၏ဂွေးဥမှာ ပျော့တွဲမနေဘဲ၊ ကျစ်လစ်နေသည်။ သင်ပေးခြင်းမဟုတ်ပဲ ဂွေးဥကိုပါနမ်းပေးလိုက်သည်။
ဂျော့လီးကား အလွန်မာတောင်ကာ မိုးပေါ်သို့ ပြန်တက်မည်သကွဲသို့ဖြစ်လာသည်။ ထိပ်ဖူးကြီးလဲ နီရဲလို့လာသည်။ စုပ်ရသည်ကို ကျေနပ်လို့နေမိသည်။ မျက်လုံးမှိတ်ပြီး တအင်းအင်း ညည်းနေသော ဂျော့ကို
“အာညောင်းရင်ရပ်လိုက်လေ၊ ငါလဲ အရမ်းလုပ်ချင်နေပြီ”
နီလာပက်လက်လှန်ပြီးအိပ်လိုက်သည်။ ကျနော်က နီလာ့ပေါင်ကြား ဒူးထောက်ဝင်ပြီး သူ့လီးကြီးနဲ့ နီလာ့ပိပိကို အထက်အောက်စုံဆန်လုပ်ပြန်သည်။ ကျင်တက်သွားသောခံစားချက်နဲ့အညီ နီလာ ညည်းလိုက်သည်။ ထိုနောက် ဂျော့က နီလာ့အဖုတ်ဝကို လီးတေ့ပြီး တဖြေးဖြေးသွင်းလိုက်တော့သည်။
“ဖျစ် ဗျစ် ဖျစ် …”
လီးကနီလာ့အဖုတ်ဖဲတိုးဝင်သွားသည်။ အရည်တို့စိုရွှဲနေ၍သာ တအိအိနဲ့ဝင်သွားသည်။ လီးအထဲရောက်သည့် အထိအတွေ့သည်လည်း အဖုတ်နံရဲသားများကို ပွတ်သွားလေရာ အရသာရှိနေသလိုခံစားလိုက်ရပြီး နီလာ ညည်းမိတော့သည်။ ကျနော်လည်း နီလာ့ပုခုံးသားကိုဆွဲပြီး လီးကို ရှေ့တိုးနောက်ဆုတ် လုပ်ပေးလိုက်တော့တယ်။
“ဗျစ် ဘွတ် ဖွတ် ဖွတ်”
တတိယအကြိမ်လိုးခြင်းဖြစ်သော်လည်း တဖြေးဖြေးချင်းသာ အသွင်းအထုတ်လုပ်ရသည်။ စေးပိုင်တင်းကျပ်မှု့ကို အပြည့်အဝရရှိပြီး နီလာ၏ လှမ်းဖက်ခြင်းကိုခံရကာ လက်သည်း အချို့က ကျောပြင်ကိုလာပြီး မထိတထိနဲ့
ထောက်နေတဲ့အခါ စိတ်တို့ပိုကြွလာပြီး ခါးကိုမတ်၍ အရှိန်တင်ပြီး တဖွတ်ဖွတ်တဖန်းဖန်းမြည်အောင် လိုးလိုက်တယ်။
“ဘွတ်ဖွတ် ဖွတ် ဖွတ်”
အစေ့နှင့်ထိတွေမှု့ဘေးနှုတ်ခမ်းသားများနဲ့ ပွတ်တိုက်မှု့တွေကြောင့် မှာခံစားဖူးပေမယ့် နောက်ထပ်ပေါင်းများစွာ လိုချင်နေသော အရသာတမျိုးကို ခံစားရပြီးညည်းမိတယ်။ တချက်တချက် ဆောင့်ချက်တွေကြောင့် အရသာအရမ်းရှိပြီး နီလာမှာတုန်တက်လာခဲ့တယ်။
“ဖွတ် ဘွတ် ဖန်း ဖန်းဖန်း”
ကာမစိတ်တို့အထွဋ်အထိပ်ရောက်လာပြီး ညည်းသံပိုထွက်ခဲ့တယ်။ ပိပိအတွင်းနံရံတွေကနေ ဂျော့လီးကို အရမ်းညှစ်သလိုလဲ ခံစားရလာတယ်။ ဂျော့က နီလာမှာ တတိယအကြိမ်ဖြစ်ပြီး ပြီးမည့်အချိန်မှာကြာမည်မှန်း သိနေသည့် အတွက်ပင် မနားတမ်းဆောင့်လိုက်သေးသည်။ ထိုနောက်တော့ ဂျော့က နီလာ့ ခါးကိုကိုင်၍ပင် လီးကိုမချွတ်ပဲ မလိုက်ကာ ပက်လက်လှန်လှဲချလိုက်ရာ နီလာမှာ အလိုအလျောက် ဂျော့အပေါ်ရောက်သွားသည်။
နီလာသိလိုက်ပါပြီ။ ဂျော့ကမိမိကိုအပေါ်စီးကနေ လုပ်ခိုင်းမှန်းသိတာကြောင့် ခြေထောက်တွေ ပုံမှန်အနေအထားရောက်စေရန် ပြုပြင်လိုက်ပြီး ရှေ့တိုးနောက်ဆုတ်လုပ်ပေးလိုက်သည်။ ငါးမိနစ်ခန့်လုပ်ပေးပြီးနောက်မှ ဂျော့က နီလာ့ခါးကို ကိုင်ပြီးကြွခိုင်းလာတာကြောင့် နီလာအပေါ်စီးကနေပြီး ဆောင့်ချပေးလိုက်သည်။ မိမိလိုအပ်သော အနေအထားအထိ အသွင်းအထုတ်လုပ်နိုင်ရန် ဂျော့ရင်ဘတ်ကို လက်ထောက်ကာ အားယူပြီးတချက်ချင်းဆောင့်ပေးလိုက်သည်။
လီးကပိပိထဲတိုးဝင်လာသလို မိမိစိတ်ကြိုက် ထိစေချင်တဲ့နေရာကို ထိန်းပြီးလုပ်နိုင်သဖြင့် နီလာသဘောကျသွားသည်။ ကောင်းလွန်းသဖြင့် အော်သံပိုထွက်တော့သည်။ အသားချင်းထိသံ တဖတ်တဖတ်နှင့် လီးဝင်သံတဇွိဇွိ၊ တဗျိဗျိပင် မြည်နေတော့သည်။ မည်သို့ပင်ကောင်းစေကာမူ အလေ့အကျင့်မရှိသော နီလာ့အတွက်
ကြာကြာလုပ်နိုင်ရန် မလွယ်၊ မောဟိုက်လာသဖြင့်
“မသာ…လိပ်မျိုးလုပ်ရင်လဲ မြန်မြန်လုပ် ကျိမ်းစပ်နေပြီ”
ဂျော့ကိုစိတ်ဆိုးနေသလိုပြောလိုက်ပေမယ့် နီလာကတော့ ဂျော့အလိုကျ အိပ်ရာပေါ် လေးဘက်ထောက်ပြီး ကုန်းပေးလိုက်သည်။ ကျနော်လည်း သူလုပ်ချင်တဲ့ပုံစံကို နီလာက ခွင့်ပြုလိုက်တဲ့အတွက် အိပ်ရာကထလာကာ နီလာ့နောက်မှာ မတ်တပ်ရပ်ပြီး ဖင်ကို ကြည့်လိုက်သည်၊ ကိတ်လွန်းတဲ့ နီလာ့ဖင်ကြီးဟာ ဝိုင်းစက်လှပြီး ခါးကျဉ်ကျဉ်ကလေးကြောင့် ပိုပြီးဆွဲဆောင်မှု ရှိနေတော့တယ်။ တင်သားကို လက်ဖဝါးဖြင့် တချက်နှစ်ချက်ရိုက်ချင်စိတ်လည်း ပေါက်လာသဖြင့် ရိုက်ထည့်လိုက်တယ်။
ဖြူဖွေးလှသော နီလာ့တင်သားမှာ နီရဲသွားတော့တယ်။
“ဒီလောက်လှတာကွာ ရိုက်ယုံတင်မကဘူး ကိုက်ပစ်ချင်တာ”
” ဖျစ် ဗျစ် ဖျစ် …”
ကုန်းပြီးခံရတဲ့အရသာကတမျိုးပါ။ အစကတော့ အောင့်သလိုဖြစ်ပြီး အထဲထိ လီးက မြုတ်ဝင်သွားချိန်မှာတော့ အဆုံးထိ ထိထိရောက်ရောက်ဝင်သွားတဲ့ ခံစားမှု့မျိုးကိုနီလာ
“ဘွတ် ဖွတ် ဖတ် ဖတ်ဖန်းဖန်းးး”
“အာ့!အင့်! အင်! အင်းဟင်းး”
ဂျော့ဆောင့်ချက်ကြောင့် နီလာမှာ နာသလို အောင့်သလိုလိုနဲ့ ကောင်းသလိုလို ဖြစ်လာတယ်၊ ဂျော့က နီလာ့တင်သားနှစ်ခြမ်းကိုဖြဲကိုင်ပြီး ဆောင့်ချက်ပြင်းပြင်းနဲ့ လိုးလေ နီလာမှာ အော်ညည်းမိလေ၊ တဖြေးဖြေးနဲ့နီလာမှာ ကာမစိတ်
အထွဋ်အထိပ်ထိရောက်လာတယ်။ ဂျော့ အတတ်ကောင်းတွေ တတ်တယ်။ နီလာ့ဖင်စအိုဝကို လက်သည်းနှင့်ထိသလို မထိသလိုလုပ်တော့ နီလာမှာစိတ်တွေပိုထလာပြီး
“အာ့!အင့်! အင်! အင်းဟင်းးဂျော့ လုပ် လုပ် ငါ ငါပြီးတော့မယ် အင့်”
ဂျော့လည်းကြာကြာမထိန်းနိုင်တော့ချေ။ အရမ်းလှပတဲ့ ဖင်ကြီးကို အားရပါးရ ဆောင့်ရတဲ့အရသာက အလွန်ပင်ကောင်းလာကာ ပြီးခါနီးလာပြီး နီလာနှင့်ပြိုင်တူပြီးနိုင်ရန် စိတ်နှစ်ပြီးမြန်မြန်ပင် လိုးလိုက်ရာ နီလာရဲ့အော်ညည်းသံနှင့် ပိုထွက်လာတယ်။
“ဘွတ်ဖတ် ဖတ် ဖန်းဖန်း”
“အိုးးရှီးးအိုးး ရှီး အား ငါပြီးတော့ မယ် အားး”
“ဘွတ်..ဖတ် ဖတ် ဖန်းဖန်း””
“ဟုတ် အာ့ ရှီးးရှီးးးအားးပြီးးပြီအား”
နီလာတစ်ယောက် အသည်းအသန် အော်လာပြီးနောက် ငြိမ်ကျသွားရတယ်။ ကျနော်လည်း နီလာမှောက်၍လဲကျမသွားစေရန် ခါးကိုကိုင်ကာ ထိန်းထားနောက် အကြိမ်နှစ်ဆယ်ခန့် ဆက်တိုက်တွန်းလိုး လိုးလိုက်ရာ သုတ်များ တဖြောဖြောနဲ့ ကွန်ဒွန်ထဲ ထွက်သွားရတော့တယ်။
“ဟားးကောင်းလိုက်တာ နီလာရာလူလည်း ချွေးတွေနဲ့နစ်ရောပဲ”
“အင်းလေ နင်အလကားရတယ်ဆိုပြီး အသေကြိတ်နေတာကိုး”
“နင်ကသာ အသေကြိတ်တယ်ပြောနေတာ ငါကအားကိုမရသေးဘူး”
“အလွှာပါးပေမယ့် တစ်ကမ္ဘာခြားသလိုခံစားရတာ ဒင်းကြောင့်အားမရတာ”
“ဒင်းရှိလို့ငါအလုပ်ခံတာ၊ ဒင်းမရှိရင် နင်လဲပြန်ဘဲ”
“ရုံးသွားရမှာနောက်ကျနေပြီ ရေချိုး နင်လဲ အလုပ်သွားရမှာမဟုတ်လား”
နီလာကပြောပြောဆိုဆိုနဲ့ထသွားရာ ကျနော်ကုတင်ပေါ်ထိုင်၍ ကျန်ခဲ့လိုက်သည်။
သူရေချိုးပြီး အလှပြင်တုန်း ကျနော်ရေချိုးလိုက်တယ်။ ပြီးတော့ သူ့ကိုရုံးကို လိုက်ပို့ပြီး ကျနော်လဲအလုပ်ကို သွားလိုက်တယ်။ နေ့လည်ရောက်တော့ နီလာ့ဆီက ဖုန်းဝင်လာပြီး
ကျနော်လဲချက်ချင်းထွက်လာပြီး သူ့ရွာအတွက် လက်ဆောင်တွေဝယ်လိုက်သည်။ ထိုနောက် သူ့ဆီရောက်သွားတော့သူက အိပ်နေသည်။ တံခါးခေါက်မှ နိုး၍တံခါးလာဖွင့်သည်။
“အင်းလေ နုံးချိနေတာဟ၊ ပြီးတော့ နည်းနည်းအောင့်နေတာ”
“ရယ်မနေနဲ့၊ ပြီးတော့ ရွာလာရင် အေးဆေးနေ”
“အင်းအခုနှစ်နာရီခွဲပဲရှိသေးတာ နင်လဲ အိပ်ဦး”
နှစ်ယောက်သားအိပ်ရာပေါ်လှဲပြီး အိပ်လိုက်ကြတယ်။ ကျနော်လဲ သူ့ကို ဖက်ထားလိုက်ပြီးနောက်လုံချည်ထဲ လက်နှိုက်၍ ပိပိကိုကိုင်လိုက်ရာ
“မသာရေ ရတဲ့အချိန်မှာတောင် ကိုင်လိုက်သေးတယ်”
နီလာလက်စဖြတ်ထားမှဖြစ်တော့မည်။ ယခုလို ဂျော့နဲ့လင်မယားလိုနေခဲ့တာ ကျေနပ်ပါသည်။ ဂျော့ကိုငယ်သူငယ်ချင်းသံယောဇဉ်နဲ့ ချစ်လည်း
ချစ်သည်။ ဂျော့ကိုချစ်ခြင်းသည် ပိုင်ဆိုင်လိုခြင်း မရှိပေ။ ယခုလိုမျိုးဖြစ်သွားလိမ့်မည်ဟု နီလာ မထင်မှတ်မိပေ။ သို့သော်ဖြစ်သွားခဲ့သည်။ ဂျော့အား ပေးဆပ်လိုက်သော်လည်ျးနာင်တလည်းရမိမည် မဟုတ်ပေ။ နောင်ရန်ကုန်ကိုလာလျှင်တော့ ဂျော့နှင့် တွေ့နိုင်သည်။ ဂျော့ကိုဆက်၍လည်း ချစ်နိုင်သည်လေ။ ဂျော့ကိုထားခဲ့လည်းသော်လည်း လွမ်းနေရမည် မဟုတ်ပေ။
ညနေလေးနာရီထိုးတော့ ဟိုတယ်မှထွက်သည်။ ကားဂိတ်ကိုရောက်ပြီး ကားထွက်မှဂျော့ကို
ပြန်ခိုင်းလိုက်သည်။ ဂျော့ပြန်သွားတော့ နီလာ့ရင်ထဲဟာ၍ ကျန်ခဲ့ရသည်။ တစ်ခုတော့ နားလည်မိသည်။ ခွဲခွာခြင်းဆိုသည်မှာ ချန်ခဲ့သူလည်း လွမ်းရသလို ကျန်ခဲ့သူလည်း လွမ်းလို့ ကျန်ခဲ့ပေမည်။
ခိုးလိုး ခိုးခံ ခိုးပြီးဖန် (စ/ဆုံး)
မီးကြောင့် သင် မလောင်ပါစေနှင့်